चितवनमा अध्यक्ष प्रचण्ड लठ्ठि टेकेर हिड्दै गरेको भेटिएपछि…. « गोर्खाली खबर डटकम
चितवनमा अध्यक्ष प्रचण्ड लठ्ठि टेकेर हिड्दै गरेको भेटिएपछि….
काठमाडौँ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन पुगेका छन् ।शनिबार अध्यक्ष प्रचण्ड बाढीपहिरो र कोरोना महामारीलगायतका विषयमा जनताको अवस्था बुझ्न गृह जिल्ला चितवन पुगेको स्रोतले बताएको छ । उनले नारायणी नदीले कटान गरेको मेघौली र माडी क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् ।
पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादमा केन्द्रीत रहेका उनी स्थायी समिति बैठक एक साताका लागि स्थगित भएपछि गृह जिल्ला पुगेका हुन् ।
ब्लड क्यान्सर पीडित बालकलाई बचाउन परिवारको आग्रह